Maitiro ekumanikidza padyo kunyorera pane iyo iPad neIOS 11 | IPhone nhau
Zvirinani kunonoka pane kusati kwamboitika. Mushure memakore manomwe, Apple yakaziva kuti iyo iPad inogona kuve inopfuura kungoita iPhone ine hombe skrini uye kuunzwa kweIOS 11 kwasimbisa shanduko iyi muchimiro. Pakutanga iwo ega ega akasarudzika maficha ePadad aive iro vhidhiyo rinoshanda pane inoyerera skrini uye iyo split split basa. Asi neIOS 11 Apple inopa nhamba hombe yezvinhu zvakasarudzika zvemuchina uyu, mabasa anozotibvumidza kuve vanobudirira zvakanyanya kupfuura izvozvi neApple piritsi.
iOS 11 inotipa Dock pazasi, iyo Dock uko iko kunyorera kwatinoita uko kunoratidzwa pamwe neizvo zvatichangobva kuvhura. Iyi Dock inoratidzika nekutsvedza chigunwe chako kubva pasi pechidzitiro mune chero chishandiso patiri. Kuti tivhare maapplication akaremberedzwa, amira kushanda kana mashandiro avo haana kukwana, hatigone kuatsvedza asi tinofanirwa kuenderera sezvatiri kuita parizvino muMacOS.
Kuti uwane multitasking muIOS 11 neiyo iPad, hatichafanirwa kubaya bhatani rekutanga kaviri, asi isu tinofanirwa kutsvedza munwe wedu sezvatinoita kuratidza iyo Dock. Tichaona kuti sei lZvishandiso zvinoratidzwa semakadhi ane preview kubva zvakafanana. Kuti tikwanise kuvhara mafomu aidiwa isu tinofanirwa kumanikidza pawo kweinopfuura sekondi kusvika x, x inoonekwa mukona yekumusoro kuruboshwe yatichafanira kutsimbirira kuti tivhare.
Maitiro atakataura pane dzinoverengeka nguva dzekuvhara kunyorera hazvibatsire pane zuva nezuva-zuva kubva ipapo iOS otomatiki inotarisira kuzviita kuitira kuti chishandiso chiwane zviwanikwa zvakakwana kuti zvishande nemazvo nguva dzese. Izvo zvinokurudzirwa chete kuzviita kana iko kunyorera kwamira kushanda kana kuzviita zvisirizvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Maitiro ekumanikidza padhuze maapplication pane iPad neIOS 11